Doorashada Dalka dalka Maraykanka oo ka bilaabatay +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Doorashada Dalka dalka Maraykanka oo ka bilaabatay +Sawirro
Codbixinta doorashada Madaxweynaha cusub een Maraykanka ayaa goor dhow ka bilaabatay qeybo ka mid ah wadankaas.
Musharaxiinta Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga ee ee ku loolamaya doorashadan ayaa goor dhow soo gebagebeeyey ololihii mudada dheer socday ee ay ku kasbanayeen shacabka Maraykanka si mid kasta uu u helo codadka ugu badan.
Afkaarta dadka laga uruuriyey ayaa muujinaysa in Mrs Clinton ay ninka ay iska soo horjeedaan ee xisbiga Jamhuuriga ku hogaaminayso boqolkiiba 4 dhibcood.
Codbixintii ugu horeysay ayaa ka dhacday tuulada lagu magacaabo Dixville Notch oo ku taal gobalka New Hamshire, waana dhaqan soo jireen ah in codbixinta ugu horeysa ay ka dhacdo Tuuladaasi oo ah tuulada kaliya oo aan ka tirsaneyn gobolada wadankaasi uu u qeybsan yahay.
Waxaana codkooda ka dhiibtay 8 qof oo kaliya, waxaana afar ka mid ah ay u codeeyeen Hillary Clinton, halka 2 qof ay u codeeyeen Trump, 1 qof ayaa codeyn, halka qofka soo haray la sheegay inuu maqan yahay.
Shacabka wadanka Maraykanka ayaa maanta safaf dhaadheer ka geli doona magaalooyinka waaweyn ee dalkaas si ay codadkooda u dhiibtaan.
Trump ayaa ugu sheegay taageerayaashiisa Florida in doorashada ay tahay fursaddii ugu dambaysay ee ay ku diidi lahaayeen dabaqad uu ku tilmaamay in musuq uu hareeyey.
Isu soo bax ka dhacay magaalada Pittsburgh ayey iyana Mrs Clinton kaga codsatay taageerayaasheeda xisbiga Dimoqaraadiga inay u codeeyaan Ameerika rajadeedu wayn tahay oo loo wada dhan yahay.